Sina Ny ozinina sy mpanamboatra fonosana Platform | Jitai
Ny fonosana dia amboarina amin'ny alàlan'ny fanerena mekanika ireo fonosana amin'ny sehatra, manana fahombiazana avo lenta tsara izy io ho an'ny famokarana betsaka. Fivoriamben'ny faritra miharo.
* Mitarika ny kovar fitaovana, fonosana mampiasa kovar, 3-442 na CRS1010 fitaovana, manana reliablity avo.
* Ny lambam-baravarana dia mandray kofehy famonoana, lasitra firaka na lasary laser.
Ny fitarihana dia fitarihana «cyclinder» mahitsy. Ny fitarihana bonding dia tokony misafidy “cyclinder” na “pinch” isaky ny filan'ny mpanjifa.
* Ny firafitry ny fitarihana dia matetika mampiasa DIP na Quad Inline izay afaka mamolavola ny filan'ny mpanjifa.
* Ny paositry ny fonosana dia nofaritan'ny mpanjifa.
* Ny famolavolana satroka dia tokony hifanaraka amin'ny fonosana isaky ny refin'ny fonosana.
* Ny mpanjifa dia tokony misafidy fonosana feno plastika Au na mitarika plating Au.
* Ny index rehetra dia tokony mifanaraka amin'ny takian'ny GJB548B.
1.Ny fotony dia ny fantsom-pifandraisana 1-429 FeNiCo na ny CRS1010, ny fikajiana sy ny fananan'ny 4,429 dia tokony hahatratra ny fenitra GBn97-1987, ny fikajiana CRS1010 ary ny fananana dia tokony hihaona amin'ny GB / T699-1999
2.Pins dia alika-pifandraisana 4,429 FeNiCo na kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny vy50 4J4J50, firafitra ary fananana
ny 4,429 dia tokony hihaona amin'ny fenitra GBn97-1987, ny fikajiana ary ny fananan'ny 4,450 dia tokony hihaona
3. Ireo insatera vera dia andian-dahatsoratra BH 、 DM-305 na Elan # 13. Famoronana sy fananan'ny andian-dahatsoratra BH
Tokony hihaona amin'ny angon-drakitra ara-teknika ny tahan'ny sara BH ao amin'ny orinasa NEG, ny firafitra ary ny fananan'ny
DM-305 dia tokony hihaona amin'ny takiana SJ / T10587.1-97.
4.Cap dia fangarona 1-442 FeNi, ny firafiny sy ny fananany dia tokony hahatratra ny fenitra GBn103-1987.
5.Braze dia HlAgCu28, ny fikajiana sy ny fananana dia tokony mifanaraka amin'ny fenitra GB / T10046-2008.
6. Fitsipika manokana momba ny famehezana dia jereo eto ambany:
4,429 Cord Cord
4,450 Varahina varahina
Varahina Zirconium maimaim-poana amin'ny vygyen
Fizarana fahatelo: Karazan-drafitra ho an'ny refin'ny fonosana
Misy ny volavolan-drafitra ho an'ny Plug-In Sidewall Metal ao amin'ny orinasanay ankehitriny:
Fomba fanodinana Fitaovana fonosana Outline ny fonosana Bika matoanteny Halalin'ny fonosana Hatevin-kase
Ny fikosoham-bolo CNC iray
Fizarana fahefatra Ny fitsipiky ny famolavolana ny maody
1.Ny fisafidianana fitaovana ho an'ny maody
Noho ny maodely grafita dia ny fanoherana ny hafanana avo, ny fanitarana hafanana ambany ary ny vera tsy asitrika
na metaly, mora karakaraina, ny grafite avo lenta dia voafantina ho fitaovana maodely.
2.Ny fisafidianana ny firafitra ho an'ny grafit
Ny andiana fonosana metaly sehatra matetika dia miverimberina mamolavola endrika iray, azo ampiasaina mora arakaraka ny toetran'ny rafitr'izy ireo.
3.Ny fitsipiky ny famolavolana ny maody avadika
Ny fanodinana sintera dia tokony hanome antoka ny tsy fitoviana amin'ny haavon'ny fifamatorana ambonin'ny pin, izay ampiasaina matetika
ny sambo iray manontolo manota.
Raha jerena ny fiolahana, ny fitarihana miondrika dia mizara zorony zorony shape endrika Z miondrika. Miorina amin'ny ampahan'ny tsipika fitarihana, ny fitarihana miondrika dia zaraina ho cyclinder miondrika, zorony boribory indraindray .
Ny famolavolana ny fitarika fonosana fisaka dia ny endrika Z miondrika, ny fitarihana dia afaka misafidy cyclinder na torolàlana mahitsizoro misy savaivony≤0.8mm (savaivony ＞ 0.8mm, tsy azo aolika amin'ny tsoroka roa).
Previous: Fonosana vy fisaka
Manaraka: Ireo mpandray anjara elektronika
Fonosana metaly vita amin'ny metaly
Fonosana metaly plug-in
Fonosana plug-in Sidewall